Waterproof akpa & azu paaki Manufacturers & Suppliers - China Waterproof akpa & azu paaki Factory
N'èzí waterproof akpa duffel akpa
Akpa mmiri na-adịghị ekpuchi mmiri kwesịrị ekwesị maka njem n'èzí. Ihe a na-ekpuchi mmiri nke PVC kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ dị iche iche, dị ka igwu mmiri, ahụike, tennis, ma ọ bụ obere njem. Nke a duffel akpa ga-abụ gị ezigbo inyeaka. Akpa akpa nke fashionistas hụrụ n'anya egwuregwu ma ọ bụ njem kwesịrị inwe. Ọ nwere ma mara mma ma dị irè.